DAAWO:Ciidammada Kanada Oo Sugaya amniga Shimbir iyo Buulkeed..!! | Afrikada
DAAWO:Ciidammada Kanada Oo Sugaya amniga Shimbir iyo Buulkeed..!!
Xaflad aad u weyn oo muusiga iyo madadaalada ah oo lagu qaban lahaa magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa dib loo dhigay, kadib markii halkii laga taagi lahaa masraxa ay ukumo ku dhashay shimbir.
Sida uu qabo qaanuunka dalka Canada, waxaa loo baahanyahay ruqsad ama ogolaansho dowladda federaalka laga helo, ka hor inta aanan meesha laga kaxeynin shimbirta.
Waxaa kale oo shardi ah in qof qabiir ah oo Shimbiraha la macaamili kara, kana taxadari kara in aysan ukumaha ka jabin lasoo kireysto marka la qaadayo shimbirta iyo buulkeeda. Munaasabadda ayaa bilaabanaysa 5-ta bishan July, balse waxaa dib looga dhacay xilligii dhismaha la bilaabi lahaa ugu yaraan labo maalmood si loosoo helo ruqsadda.
Ukumaha iyo buulka ayaa waxaa la dhigayaa goob xeendaaban oo garoonka ka dambeysa, meel fogna lama geyn doono si aysan u mal wareerin shimbirta. Noocan shimbirka oo afka qalaad lagu yiraahdo Killdeer ayaanan ka mid ahayn kuwa sii dabar go’aya, balse waxaa lagu illaaliyay shuruucda federaalka ee Canada iyo Maraykankaba, waxayna ka mid yihiin shimbiraha u kala goosha deegaanada kala duwan.
Buulka ayaa waxaa lagu xeendaabay xarig jaale ah, waxaana dusha ka waardiyaynaya illaalo ay dowladda u xil saartay. “Waxaan oran karaa, waa caqabadii ugu weyneyd ee nasoo wajahday, balse waan xalin karnaa” ayuu yiri Mark Monahan oo ah agaasimaha mehrajaankan oo ay sanad kasta ka qeybgalaan kumanaan kun oo qof.